Xildhibaano ka soo jeeda gobollada Baay iyo Bakool oo eedeyn kulul u jeediyey Puntland. – Radio Daljir
Xildhibaano ka soo jeeda gobollada Baay iyo Bakool oo eedeyn kulul u jeediyey Puntland.
Seteembar 12, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Sept, 12 – Xildhibaanno ka tirsan dawladda Federalka kana soo jeeda gobolada Baay iyo Bakool ayaa dawladda Puntland ku eedeeyey inay isir sooc ku samaysay dadka ka soo jeeda gobolladaas eek u dhaqan deegaanada Puntland.
Xildhibaan Maxmed Ibraahim Xaabsade oo ka mid ahaa xildhibaanadaasi ayaa sheegay in Puntland ay hadda ku xiran yihiin in ka daban 1,200 oo qof, lana dilay kudhawaad 150 kale oo dhammaan ka soo jeeda gobolada Baay iyo Bakool.
Xildhibaan Madoobe Nuunaw Max?ed oo isna ka mid ahaa xildhibaanada hadlay ayaa sheegay inaysan ka qaybgaleyn shirka wadatashiga arrimaha Soomaaliya ee wajigiisa labaad lagu wado inuu ka dhaco magaalada Garoowe,sababtuna tahay eedeeyn taasi.
Dhinaca kalena wasiirka amniga ee dawladda Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa u sheegay idaacadda VOA in arrintaasi tahay wax kama jiraan ayna dadka gobolladaasi ka soo jeeda ay si xorriyad ah ugu nool yihiin Puntland.
Wasiirka ayaa sheegay in xildhibaanadu ay ku fududaadeen hadalkaasi ayna tahay inay fahmaan inay yihiin xildhibaano qaran ee aysan ahayn xildhibaanno qoys.
Kumanaan ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolada Baay iyo Bakool ayaa deggan deegaanada Puntland kuwaas oo isugu jira qaar deggan xeryaha barakacayaasha iyo qaar kale oo si caadi ah uga xoogsada magaalooyinka.
Puntland oo beenisay eedayanta xildhibaanada gobollada Bay & Bakool.
Baahin: Axad, Sept 11, Weriye Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkayco. Guddi Issimo ah oo loo saaray colaadii Galkacyo; Garaad Saleebaan Buraale ayaan ka waraysanay; Maxkamada ciidanka qalabka-sida ee Puntland oo digniin u dirtay ciidanka dawlada ee hubka ku sita magaalooyinka; Dagaal khasaare gaystay oo ka dhacay gobolka Gedo; Al-shabaab oo la wareegtay Ceelwaaq.